Dhageyso: Wasiirada Arrimaha Dibada Somalia Fowsiya Xaaji oo barlamaanka su’aalo ka weydiiyeen Hindise sharciyeed ay u soo gudbisey – idalenews.com
Dhageyso: Wasiirada Arrimaha Dibada Somalia Fowsiya Xaaji oo barlamaanka su’aalo ka weydiiyeen Hindise sharciyeed ay u soo gudbisey
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunt golaha Shacabka waxa ku dhageysteen aqrinta 3aad Hindise Sharciyeedka Shaqada ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga oo ay horey Wasaaraddu ugu u soo gudbisay baarlamaanka.
Kulanka maanta waxaa shir guddoominayay Guddoomiya Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, iyadoo ajandaha kulanka uu ahaa aqrinta 3aad Hindise Sharciyeedka Shaqada ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda, waxaana kulanka soo xaadiray 157 mudane, waxaana goob joog ka ahaa kulanka Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo iskaashiga Caalamiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Marwo Fowsiyo Xaaji Aadan oo Su’aalo ku saabsan sharciga uga jawaabaysay Xildhibaannada.
Guddiga Arrimaha Dibedda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyay xildhibaannada xaadiray kulankaasi, iyagoo sheegay inay tifaftireen sharcigaasi.
Qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa dooda loo furay, kuwaaasi oo ka hadlayay qaabka ay u arkaan hindise sharciyeedka Shaqada ee Wasaaradda arrimaha dibedda oo ay baarlamaanka u soo gudbisay.
Dood dheer kadin Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in hindise sharciyeedka markale laga doodi doono maalinta berito ah, isagoo xusay in shirka maanta uu halkaasi ku egyahay.
Weerar Ismiidaamin oo lagu qaadey guri u kireysaa qaar ka mid ah shaqaalaha Turkiga ee jooga Muqdisho
Militariga Masar oo in ka badan 700 qof dhaawac iyo dhimasho ugu gaysatey Xaafada Al Nasir si ay u kala eriyaan taageerayaasha Mursi